Golaha Wasiirada Jubbaland oo Dhawaan lagu Dhawaaqayo – Radio Daljir
Diseembar 27, 2015 7:35 b 0
Axad, December 27, 2015 (Daljir) —Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in 10ka bishan uu madaxweyne Madoobe soo magacaabi doono 10 wasiir oo kamid noqon doona golaha wasiiradda ee maamulka Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa la sheegay in ka hor shirka wada-tashiga oo Kismaayo ka furmaya 10ka bisha soo socota uu ku dhawaaqi doono 10 wasiir,waxaana sababta uu uga hormarinayo shirka lagu sheegay si ay ugu shaqeeyaan waxyaabaha lagu heshiiyo oo shirka kasoo baxa,islamarkaana shacabka Jubbaland ay noqdaan kuwa kasoo dhaalaala doorka waxyabaaha shirka laga soo saaro.
Golaha Wasiiradda ee Maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa inay noqdaan 18, walow ay jiraan beelo Axmed Madoobe ku cadaadinaya inuu ka qayb galiyo wasiiradda uu soo magacaabayo, waxaana laga yaabaa inay inta ka bataan.
Madaxweyne Madoobe oo markii labaad la doortay bishii sideedaad ee sanadkaan ayaan wax xukuumadda soo dhisin,baarlamaanka Jubbaland ayaa labo jeer xiliga ukor dhiyey uu kusoo dhisayo golaha wasiiradda,waxaana wakhtigii Baarlamaanku kordhiyey ku egyahay bisha Kowaad ee sanadkaan.
Jubbaland ayaa tan markii la asaasay waxaa laga dareemayaa hormar dhinacyo badan taabanaya, balse dadka si dhow ula socda Siyaasadda Jubbaland waxay sheegeen in cadaadis uu saaran yahay madaxweynaha oo ku aadan soo xulista Wasiiradda taasna ay keentay inay wakhti ku qaadato.
Beelaha dega deegaanada Jubbaland waxay qaarkood dhaliilsan yihiin Siyaasadda Madoobe,kuwaaas oo badan kood iska dhex waayey Xukuumaddi hore.
Meelo kamid ah deegaanada jubbaland waxaa ka taliya Alshabaab, waxayna Siyaasiyiinta qaarkood arintaa ka muujiyeen dhaliil, oo ay sheegeen in Madoobe uu gacanta ku qaban karay meelaha ka maqan mudada uu Xafiiska joogay.
Dhanka kale Jubbaland ayaan wali yeelan madaxweyne ku xigeen, maadaama Dastuurka Jubbaland uu dhigayo in Jubbaland ay yeelato hal madaxweyne, waxaan hada Xafiiska jooga labo madaxweyne ku xigeen,kuwaas oo doorasho ku yimi Xukuumaddii hore.